के ईंटा वा रंगीन रंगले "पूर्वावलोकन" सच्चा पूर्वाग्रह प्रकाशहरू गर्दैन? - MediaLight पूर्वाग्रह प्रकाश
हामी यो प्रश्न धेरै प्राप्त, र म केहि परिप्रेक्ष्य प्रदान गर्न चाहान्छु।
पहिले, मलाई केवल यो मात्र भन्न दिनुहोस् कि यदि तपाईं र gra्ग ग्रेडिंग भिडियो हो भने, तपाईं पक्कै पनि वातावरणमा सबैभन्दा धेरै नियन्त्रण गर्न चाहनुहुन्छ जुन तपाईं गर्न सक्नुहुन्छ वातावरणमा। यसले वर्णक्रमान्-फ्ल्याट पेन्ट र प्रकाश नियन्त्रण समावेश गर्दछ - अर्थात विन्डोजबाट कुनै प्रकाश प्रदूषण, यन्त्रहरूमा चमक एलईडी डिस्प्ले, इत्यादि।
अब, त्यस्तो बाटोको साथ, त्यहाँ त्यस्तो अचूक समयहरू छन् जहाँ यो सम्भव छैन, र धेरै रंगकर्मीहरूले मलाई होटेलको कोठामा काम गर्ने बारेमा भनेका छन् वा हालसालै घरदेखि महामारीको कारण।
म केहि चीजहरू औंल्याउन चाहन्छु जुन हामी धेरैलाई सहजपूर्वक थाहा छ:
हामी कोठामा पेन्टको रंगको लागि टिभी क्यालिब्रेट गर्दैनौं। हामी यसलाई D65 क्यालिब्रेट गर्छौं, जुन उज्यालोको सेतो पोइन्ट हुनुपर्दछ।
पेन्टको रंगले प्रकाशको र veryलाई धेरै असर गर्दैन, तर प्रकाशको रंगले पेंट हामीलाई कति यथार्थ देखिन्छ यसले असर गर्छ।
एक राती क्लब वा रंगीन बत्तीहरूको साथ पार्टीको बारेमा सोच्नुहोस्। रातो बत्ती भएको सेतो कोठामा र सेतो बत्ती भएको रातो र pain लगाइएको कोठामा हुनुबीच ठूलो भिन्नता छ। भित्ताहरू उस्तै र color जस्तो देखिन्छ, तर कोठामा भएका सबै कुरा एकदम फरक देखिन्छ।
सरल भाषामा भन्नुपर्दा, रातो बत्तीहरू मुनि, कोठामा सबै रातो देखिनेछ। तपाईंको छाला रातो देखिनेछ, तपाईंको लुगा रातो देखिनेछ, र रातो बत्ती मुनि रहेका सबै कुरा रातो देखिनेछ।
अर्कोतर्फ, यदि हामी रातो रंग र सेतो बत्तीको स्रोत भएको कोठामा छौं भने, यस्तो हुने छैन (भित्ताहरू धेरै माथि नहुँदासम्म नमूना परावर्तन - सोच्नुहोस् रातो टिन्टेड मिरर वा चमकदार रातो पेन्ट, स्पोर्ट्स कार जस्तै)।
तपाईं रातो भित्ताको छेउमा पनि उभिन सक्नुहुन्छ र सेतो बत्ती बाउन्स हुन तपाईं र तपाईं सक्नुहुन्छ अझै पनि रातो जस्तो देखिँदैन (जबसम्म तपाईंसँग वास्तवमै खराब सनबर्न हुँदैन)।
म दुई फरक कुराहरु छलफल गर्न जाँदैछु। पहिलोलाई क्रोमेटिक अनुकूलन भनिन्छ र दोस्रो विपक्षी-प्रक्रिया रंग सिद्धान्त हो।
हामी भनिन्छ कि प्रक्रिया को माध्यम बाट हाम्रो चारै तिर प्रकाश को रंग अनुकूलन रंगीन अनुकूलन र त्यो फरक प्रक्रिया हो विरोधी - प्रक्रिया रंग (रंग चक्र) सिद्धान्त। यी दुबै चीजहरू भइरहेको छ, तर टिभी वा मोनिटर जस्ता ट्रान्समिसिभ डिस्प्ले हेर्दा रंगीन रूपान्तरणले आउटसोर्स भूमिका खेल्छ।
सामान्यतया, हामी टिभीमा टाँस्दछौं हाम्रो कोणलाई बारम्बार परिवर्तन नगरिकन, त्यसैले विपक्षी-प्रक्रियाले छविलाई वास्तवमा असर गर्दैन किनकि यदि तपाईं निलो पर्खालमा ढाल्नुभयो भने यसले प्रायः तपाईंको दृष्टिलाई असर गरिरहेको छ। वरिपरि स्क्रिन र पर्दा आफैंमा होइन।
र paintको र than भन्दा बढी, तपाईं एक्लो प्रकाश स्रोतको रूपमा पूर्वाग्रह लाइटबाट कोठामा बत्तीको र toमा छाँटकाँट गर्नुहुनेछ।
यसको बारेमा सोच्नुहोस्: र lights्गले टिभीलाई अन्य बत्तीहरूसँग कतिको प्रभाव पार्छ? यो वास्तवमै कुनै फरक छैन। आदर्श पूर्वाग्रह प्रकाश उत्तम सम्भव स्थानमा सही सेतो पोइन्टको प्रकाश स्रोत बाहेक अरू केही हुनु हुँदैन।
त्यहाँ वातावरणीय बत्ती भएको कोठामा टिभी हेर्दा बिभिन्न कुराहरू भइरहेका छन्।
विपक्षी प्रक्रिया रंग सिद्धान्त - उदाहरण: बिक्रेताहरूले टमाटर चटनीमा हरियो लेबल राख्छन् जसमा सॉस बढी रातो / पाकेको देखिन्छ। Flag० सेकेन्डको लागि अमेरिकी झण्डाको छविमा हेर्नुहोस् र टाढा हेर्नुहोस् र हामी इन्भर्स अफ्टिमेज देख्छौं:
क्रोमेटिक अनुकूलन - हामी हाम्रो प्रकाश अनुरूप। यदि मैले मेरो फोन 3000००० के गरियाना बल्ब वा मैनबत्तीको प्रकाशमा हेर्छु भने, स्क्रिन न्यानो प्रकाशको भित्र निलो देखिन्छ र यो म्याजेन्टा कम क्वालिटी, हरियो प्रकाशको रूपमा देखिन्छ। यदि तपाईंसँग नयाँ एप्पल आईओएस उपकरण छ भने, ट्रायटोन खोल्नुहोस् र खोल्नको लागि फोन (र तपाईं) प्रकाशमा कसरी अनुकूल बनाउँदछ, कोठामा कपडा वा पेन्टको रंगमा होइन।
मेटामेरिजम अनुक्रमणिका / कम सीआरआई (रंग रेन्डरिंग सूचकांक) प्रकाश स्रोतहरू - हामी कम सीआरआई प्रकाशमा नराम्रो देख्छौं। हामी एउटा उज्यालो कम सीआरआई प्रकाश भन्दा मधुरो, उच्च सीआरआई प्रकाशको मुनि राम्ररी देख्न सक्दछौं। खराब प्रकाश अन्तर्गत नीलो र कालो मोजाहरू बेमेलको सोच्नुहोस्।
हेरौं कसरी सेतो प्रकाशले तपाईंको निलो भित्ताबाट सेतो छतमा बाउन्स गर्दछ। तपाइँले छतमा नीलो प्रतिबिम्ब देख्नुहुन्न। यो भन्दा फरक छ यदि तपाइँले निलो वा सेतो भित्तामा सेतो छतमा निलो बत्ती प्रतिबिम्बित गर्नुभयो भने।
पेन्टको रंगको प्रकाशको रंग भन्दा कम प्रभाव छ। यो बुझ्छ। हामी कोठामा पेन्टको रंगको लागि टिभी क्यालिब्रेट गर्दैनौं। हामी यसलाई D65 क्यालिब्रेट गर्छौं, जुन उज्यालोको सेतो पोइन्ट हुनुपर्दछ।
यदि हामी नीलो भित्तामा रातो बत्ती उखेलेर भित्ताको रंगको लागि "सुधार" गर्न कोसिस गर्छौं भने हामी वास्तवमै खैरो हुँदैनौं (रातो सतहले निलो बत्तीलाई प्रतिबिम्बित गर्दैन। यसको सट्टामा तपाईले अन्धकार पाउनुहुनेछ)। यद्यपि, पेन्टहरू पूर्ण रूपमा रातो वा निलो छैनन्। तिनीहरूमा रंगद्रव्यहरूको मिश्रण हुन्छ। यदि हामीले विपरित प्रकाश र lightको साथ भित्ता र color सच्याउने कोसिस ग .्यौं भने, हामी गलत प्रकाशले नुहाई समाप्त गर्दछौं र यसलाई अनुकूल बनाउने छौं, प्रदर्शन गलत देखिने बनाउँदछौं।
यो सबै कुरा भन्नको लागि लामो मार्ग हो कि यदि तपाईं बेज, पाउडर पहेंलो, हल्का हरियो वा निलो पर्खाल हुनुहुन्छ भने, तिनीहरूले कोठामा प्रकाशको सेतो पोइन्टमा आश्चर्यजनक रूपले थोरै प्रभाव पार्छन्। र, यदि तपाईंसँग र colored्गीन भित्ताहरू छन्, यति धेरै व्यक्तिहरूले गरे, सही बत्तीहरू अझै पनि D65 मा धेरै नजिकै नाप्न गइरहेका छन् जहाँबाट तपाईं बसिरहनु भएको थियो।
जे होस्, जब तपाईं भित्ताहरू खैरो रंग्न सक्नुहुनेछ, यसले तपाईंको प्रदर्शनलाई चम्काउन दिन्छ, र यदि तपाईं पेशेवर रंगीन कलाकार हुनुहुन्छ, तपाईं स्पष्टतः आफ्नो वातावरणमा अधिकतम नियन्त्रण चाहनुहुन्छ, जुन अवस्थामा निर्भर गर्दछ। रंगीय कलाकारहरूले दृश्यको एकल फ्रेमको छानबिन गर्न धेरै समय खर्च गर्दछन् जबकि हामी घरमै धेरैजना रोकिन्छौं र कुनै चीजलाई धेरै लामो समयसम्म हेर्दैनन्।
खैरो र्गले र color्गीन रंगकर्मीलाई आवश्यक पर्ने थप तहको छानबिन प्रदान गर्दछ। यसले पेशेवर र उपभोक्ताहरूको लागि सिफारिस गरिएको चमक किन फरक छ भनेर पनि व्याख्या गर्दछ।
पूर्वाग्रह प्रकाशको सिफारिश चमक प्रयोगकर्तामा आधारित फरक हुन सक्छ। जबकि उत्पादन पेशेवरहरू सामान्यतया कम चमक (4.5.-5--2 सीडी / एम ^ २) को साथ मधुरो चारैतिर रुचाउँछन् किनकि यसले उनीहरूलाई उच्च प्रकाश स्तरको तुलनामा अधिक तीव्रताका साथ हेर्न मद्दत गर्दछ, उपभोक्ताहरूले प्राय: उच्च चमक सेटिंग्सको आनन्द लिन्छन् (अधिकतम चमकको १०%) प्रदर्शन) जब उनीहरूको मनपर्दो श्रृंखलाहरू घरमै हेर्दै हुनुहुन्छ किनभने यसले रंगलाई वास्तवमै बाहिर खडा बनाउँदछ र कालो स्तरहरूमा सुधार गर्दछ।
अघिल्लो लेखमा मलाई मेरो टिभीको लागि पूर्वाग्रह प्रकाशको कुन लम्बाइ चाहिन्छ?
अर्को लेखमा आँखा तनाव र OLED: सत्य यो खराब छ कि हो